Ihe kacha mma dị na mpụga na Kildare - IntoKildare
Ezinụlọ, N'èzí, ndị na-anụ ọkụ n'obi, Ihe Ime
Anyị na -elekọta na Kildare maka ọdịmma
Kildare juputara na ọmarịcha ọmarịcha ihe nkiri na n'ime 5kms ọ bụla enwere ụzọ ọhịa ma ọ bụ njem okike ka a ga-achọpụta. Ịga n'èzí na imega ahụ n'oge mgbụsị akwụkwọ ọhụrụ na nke dị nro dị mma maka obi na uche dị ka mgbatị ahụ, yana ime ka ahụ gị dị mma, na-ahapụ endorphins nke ga-enyere ndị mmadụ aka ịnọgide na-adị mma. Kedu ihe kpatara na ị gaghị aga maka ije ije nri ehihie ma ọ bụ mee ka ụmụaka gaa njem njem n'ime ubi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ahịhịa ala ahịhịa juru na gburugburu Kildare. Bukọta picnic, kechie ọkụ ma chọpụta akụ okike Kildare na-echekwara gị.
Biputere nke 𝔸𝕟𝕟𝕖 𝕄𝕒𝕣𝕚𝕖 𝕊𝕠𝕞𝕖𝕣𝕤 🇮🇪 (@amsomers_photos) kesara
Naanị obere oge na mpụga obodo Rathangan bụ otu n'ime ihe nzuzo kacha mma maka Ireland maka okike! Osisi Killinthomas na County Kildare dị ka ihe kwụ ọtọ site na akụkọ ifo na otu n'ime ọmarịcha osisi ọhịa na Ireland niile! Mpaghara ihe ọkụkụ dị 200 acre bụ ọhịa conifer siri ike nke nwere ahịhịa na ahịhịa dị iche iche. Enwere ihe dị ka kilomita iri nke ije ama ama ama na osisi maka ndị niile hụrụ n'anya na -eme njem, ndị a na -enye ohere maka ụdị gburugburu ebe obibi dị iche iche.
Biputere tazt.photos (@tazt.photos)
Ọ dị ihe karịrị nkeji iri atọ na mpụga obodo Kildare bụ Ogige Ugwu Donadea. Site na ụzọ ụkwụ atọ dị iche iche, ha niile sitere na 1km ruo 6km, enwere ihe dabara afọ niile ebe a. Maka mkpagharị mkpagharị ehihie dị mkpirikpi, soro Lake Walk, nke na-agbagharị n'akụkụ ọdọ mmiri juputara na mmiri, ọ naghị ewe ihe karịrị ọkara awa. Trazọ Nature dị n'okpuru 2km, nke na -agafe ụfọdụ ihe owuwu ụlọ ahụ. Maka ndị na -eje ije nwere oke agụụ, Aylmer Walk bụ ụzọ 6km Slí na Slainte nke na -eweta ndị na -ejegharị gburugburu ogige ahụ.
Nke biputere Ewen Cameron (@ewen1966)
Nwee mkpagharị izu ụka n'akụkụ mmiri nke otu n'ime osimiri akụkọ ihe mere eme nke Ireland, Osimiri Barrow. N'inwe ihe na-akpali mmasị na ntụgharị ọ bụla na ntanye a dị afọ 200, osimiri a bụ ezigbo enyi maka onye ọ bụla na-eje ije ma ọ bụ na-agba ịnyịnya. Rowzọ Barrow. Nweta osisi na osisi ndị dị n'akụkụ mmiri ya, mkpọchi ndị mara mma na ụlọ ochie ndị na-echekwa mkpọchi.
Ụzọ Royal Canal
Biputere nke Sadie Basset (@sadie.basset)
Ụzọ yiri ya nke na -aga n'okporo ụzọ Barrow, nke a na -aga ije kwụ ọtọ, Ọwa mmiri Royal Canal dị mma maka ndị chọrọ ijide kọfị wepu ma nọgide na -aga. Na -eje ije ruo ebe masịrị gị, ị nwere ike ịfefe n'ụgbọ njem ọha ka ọ dịghachi gị azụ. Enwere ọtụtụ ihe atụ dị ịrịba ama nke ngwụcha narị afọ nke iri na asatọ ụlọ ọrụ nkà mmụta ihe ochie iji nwee mmasị n'okporo ụzọ, gụnyere Ryewater Aquaduct nke na-eburu ọwa mmiri dị n'elu osimiri Rye, nke were afọ isii iji wuo ya.
Mbipụta nke Scott H. Smith (@scottsmith02) kesara
Nestled na Ancient East nke Ireland bụ County Okporo ụzọ Monastic Kildare, n'obi nke Iso Ụzọ Kraịst malitere na Ireland. Ụzọ a mara mma na -agwakọta ma ọdịdị ọdịdị nke Ireland yana akụkọ mgbe ochie ya pụrụ iche. Site na Castledermot ruo Oughterard dị nso na Straffan, ụzọ a nke 92km ga-eduga gị na mkpọmkpọ ebe nke ebe obibi ndị mọnk ochie, ụlọ elu gbara agba gburugburu na obe ndị dị oke elu. Enwere ike ibudata ntuziaka ọdịyo n'efu iji nyere gị aka ịbanye n'ime akụkọ ihe mere eme nke monastic oge ochie nke Ireland.
Ọgụgụ nke Allen
Ogologo ya dị kilomita 370 n'ime obodo Meath, Offaly, Kildare, Laois na Westmeath, the Ọgụgụ nke Allen bụ mkpọmkpọlite ​​elu nke akọwara dịka akụkụ nke akụkọ ihe mere eme nke Irish dị ka Akwụkwọ nke Kells. Bog butter, mkpụrụ ego, nnukwu Irish Elk na ụgbọ mmiri gwuru ochie bụ naanị ụfọdụ ihe na -atọ ụtọ enwetaghachiri na nchekwa echekwara site na ahịhịa.
Biputere nke shannon kearney (@shannonstudio_)
Pollardstown Fen, na nso Newbridge bụ mpaghara peatland alkaline nke na -eguzo ihe karịrị hectare 220 wee nweta nri sitere na mmiri iyi bara ụba nke calcium. Karịsịa n'okpuru ikike nke steeti, ọ dị mkpa mba ụwa ma nwee ọtụtụ ụdị ahịhịa na -adịghị ahụkebe, yana ndekọ pollen na -akwụsịghị akwụsị maka mgbanwe nke mejupụtara ahịhịa na -alaghachi azụ n'oge ice ikpeazụ.
Biputere Into Kildare (@intokildare)
O nwere ike ịbụ traktị kacha ochie na nke sara mbara nke ahịhịa ahịhịa dị obere na Europe na saịtị nke ihe nkiri 'Braveheart', nke Ala Curragh bụ ebe a na-ewu ewu maka ndị obodo na ndị ọbịa. Na 5,000 acre na-eje ije site na Kildare Town ruo Newbridge, Curragh na-enye ụzọ njem sara mbara iji chọpụta na mgbe ị na-egwu egwu site na ahịhịa ahịhịa, ndị ọbịa nwere ike ịkwụsị na Museum Museum nke dị na Curragh.
Soro nzọụkwụ Arthur Guinness na-ewere na saịtị akụkọ ihe mere eme jikọtara na ndị na-emepụta mmanya kacha ewu ewu na Ireland - ezinụlọ Guinness. Chọgharịa n'obodo Celbridge ebe Arthur nọrọ oge ọ bụ nwata, Leixlip, saịtị nke ebe a na-eme mmanya mbụ ya, ebe ntụgharị okwu Ardclough na ihe ngosi 'From Malt to Vault' na Oughterard Graveyard, ebe izu ike ikpeazụ ya. Echefula ịnya ibu na njem gaa Ụlọ Castletown na Parklands mgbe tinyere ụzọ!
EzinụlọN'èzí, ndị na-anụ ọkụ n'obiIhe Ime
Nna Day echiche maka gị Kildare papa